» ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका प्रतिभाहरु भाग ९ (भिडियो)
ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका प्रतिभाहरु भाग ९ (भिडियो)
२९ भाद्र २०७६, आईतवार १८:२४
मकवानपुर, २९ भदौ । चर्चित गायन प्रतियोगिता ‘भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्लाईन्ड अडिसन राउण्ड चलिरहेको छ । यस भिडियो सेरिजको आठौँ भागसम्म ब्याटल राउण्डका लागि छानिएकाहरुमध्ये ४० जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गरिसकिएको छ । यदि तपाईले उक्त भिडियोहरु हेर्नुभएको छैन भने यस भिडियोको डिस्क्रीप्सनमा लिंक राखिएको छ । भिडियोको यो नवौँ भागमा ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका थप ३ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । हेरौँ भिडियो–
आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज सबैभन्दा राम्रो लाग्छ ? तपाईको विचारमा को फाईनलसम्म पुग्न सक्छ ? कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला । साथै यो भिडियोको अर्को भाग पनि हेर्न नभुल्नुहोला ।
ब्याटल राउण्डमा पुगेका प्रतियोगीहरु भाग 8 (भिडियो)